Ngwa 5 nke ị na-agaghị echefu maka Virtual Reality | Gam akporosis
5 mebere eziokwu apps ka ịmalite site na Google Cardboard
Afọ a eziokwu eziokwu bụ na-enwe nnukwu ọrụ n'ihi HTC Vive, Samsung Gear VR ma ọ bụ DayDream nke ga-abata na mgbakwunye na gam akporo mgbe ewepụtara ya na ngwụsị oge ọkọchị. E nwere ọtụtụ ndị nrụpụta ga-ebupụta n'ime atụmatụ VR nke Google, dị ka Huawei, nke kwurula na site na njedebe nke afọ, anyị ga-ama mgbe ngwaọrụ mbụ ha dakọtara ga-abata n'oge a nke ahụmahụ nke ga-emepe ụwa ọhụrụ iji chọpụta n'ihu anyị.
Ka anyị na-eche ịnwe ngwaọrụ ndị ahụ, DayDream ma ọ bụ nke ọhụrụ Google kaadiboodu, anyị nwere ike ịmata ụfọdụ n'ime ngwa kachasị mma maka ezigbo eziokwu anyị nwere ugbu a site na Playlọ Ahịa Google n'onwe ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme ka sọftụwia zuru ezu nwee ike ịnye ndị ọrụ ọhụụ nnukwu ọdịnaya ga - abịa otu n’ime iko ndị ahụ ma ọ bụ ụfọdụ n’ime ndị ahụ na - emepụta onwe ha ga - ebido mgbe anyị nwere DayDream na gam akporo.
1 bọọdụ caaaaa!
2 Otu oche n’otu ụlọ
3 VR Cedar Point
4 Onye ọkpụkpọ VR
5 Kaadị Igwefoto
6 Dị ka onyinye: Arte360 VR
Kedu ụzọ kachasị mma karịa ịnweta ụwa ọhụụ ọhụụ nwere egwuregwu vidiyo nke ike anyị nwere diri vertigo be anwunwa. Caaaaardboard bụ egwuregwu kachasị mma maka nke a ma tinye gị n'ọnọdụ nke ịwụpụ site na ụlọ ndị toro oke ogologo nke ị nwere ike ịta ahụhụ dị egwu. Earn na-enweta isi ka ị na-ebu ụfọdụ mmegharị nke ndị enwere ike ịdekọ iji nyefee ha na YouTube, ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe ị na-ese ụlọ ndị ahụ.
Otu oche n’otu ụlọ
Un egwuregwu egwu N'ime ahụmịhe nke mebere eme nke emikpuru gị ka uche gị na ụda uche gị wee jupụta n'ihe teknụzụ na-enye, ọ bụ ihe zuru oke iji nọgide na-adọrọ mmasị ụwa nke meghere n'ihu anyị.
Oche dị n'ime ime ụlọ bụ aha ị kwesịrị ịkpachara anya maka ndị ahụ ọnwụ na-atụ ụjọ na ị ga-ewepụ n'ihi gburugburu ebe obibi nke a ga-edebe n'ihu gị, dịka a ga - asị na ị nọ na ihe nkiri na - atụ ụjọ. Ihe ị ga-enweta.
VR Cedar Point
Ihe kpatara aga igwe na-agba agba nke ogige ntụrụndụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ya n'ụlọ? Nke a bụ echiche dị n’azụ Cedar Point VR, egwuregwu vidio nke ga - eduru gị site na ahụmịhe zuru oke iji mee ka ị maa jijiji site na ụfọdụ n’ime ihe ịtụnanya dị ịtụnanya n’ụwa.
O doro anya na ndị nwara Oculus Rift na ngosi nwere ihe ojoo ojoo mara na onye mbu ihe nwere ike ịmepụta egwuregwu nke ụdị a. Ezigbo nrịanya enweghị ike ịla na ndepụta a.
Onye ọkpụkpọ VR
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-amalite ọtụtụ ọdịnaya kpọmkwem maka eziokwu dị adị, yabụ anyị chọrọ ezigbo onye ọkpụkpọ mgbasa ozi iji nwee ọ enjoyụ dịka dwarfs na usoro a. VR Player bụ azịza kachasị ọsọ mgbe anyị na-achọ ngwa nke ụdị a.
Ọ nwere ike ijikwa ọtụtụ faịlụ vidiyo, 2D na 3D ọdịnaya na ọbụna strimụ ọdịnaya ị nwere na mpaghara gị na netwọk. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịma etu ị ga-esi lelee vidiyo ụlọ gị site na iko VR, ngwa a bụ nke zuru oke maka ya.
Ngwa nke Google maka iko VR ya agaghị efu na ndepụta a. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ mikpuo onwe gị na foto ndị ahụ na ike ga-enweta site na nke gị mebere ụwa, ọ bụ nke zuru okè ngwa maka ya. Ọ na-arụ ọrụ zuru oke n'okpuru ọnọdụ panoramic na ọtụtụ ekwentị, belụsọ na ị weghara onyonyo na 3D ma dekọọ ụda ihu igwe ka nsonaazụ ya bụ ọnọdụ na-etinye gị n'ụzọ zuru oke na eziokwu dị adị.
Dị ka onyinye: Arte360 VR
A gaghị enwe ngwa ise mana ọ bụ naanị 6 mebere eziokwu ma ọ bụ ngwa VR. ARTE360 VR bụ ihe kacha mma maka gini bu omenaala na mmuta akwukwo nke nwere ike ịkwalite eziokwu dị adị. Otu n'ime ọwa kacha mara amara na Europe maka nka na agụmakwụkwọ nwere ngwa nke ya maka eziokwu nke ị na-agaghị echefu. Ọdịnaya niile bụ n'efu ma na-enye gị ohere ịchọpụta ụwa n'ezie, kpọọ mkpụmkpụ nrite, ma ọ bụ rute nso n'otu abalị na opera.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » 5 mebere eziokwu apps ka ịmalite site na Google Cardboard
Zombieville USA 2 na-ama gị aka na zombie apocalypse na nnukwu oge ịse 'em elu
5 egwuregwu kacha mma maka gam akporo